दिपेन्द्रलाई पुरस्कार मात्रै की बढुवा पनि ? | PARDAFAS
KATHMANDU : नेपाल प्रहरीका सब इन्स्पेक्टर दिपेन्द्र अधिकारीसँगको चिनजान पुरानै हो । मिलनसार छन , भेटदा बोल्छन , संगठनको सुधार र आधुनिकीकरणका पक्षधर हुन । जे होस प्रहरीमा सही र गलतको आवाज राख्न सक्ने हुन मेरो नजरमा ।
कुरा भक्तमान श्रेष्ठको अपहरणका समयको हो । म एभिन्युज टेलिभिजनमा कार्यरत थिए । तात्कालिन बिपि कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल चितवनका निर्देशक डाक्टर भक्तमान श्रेष्ठलाई अपहरण पछि करिब पाँच किलो भन्दा बढि सुन लिएर रिहा गरिएको थियो । उनी अपहरण भएको सार्वजनिक भै सकेपछि प्रहरी मुख्यालयले हाल डिआईजी देवेन्द्र सुवेदी , एसएसपी शिब लामिछाने , हाल डिएसपी भै सकेका कृष्ण कोइराला र दिपेन्द्र जी फिल्डमा थिए । म र क्यामरा पर्सन नविन के श्रेष्ठ जेठको गर्मीमा चितवनमा थियौ । हामीलाई टेलिभजिनका लागि एक्सक्लुसिभ म्याटर पठाउन कडा निर्देशन थियो । हामी लगातार प्रहरी, प्रशासन, अस्पतालका चिकित्सक र त्यतीबेला मुख्य सस्पेक्ट मानिएको माओवादीका जिल्ला सचिवलाई पछ्याई रहेका थियौ । एकदिन म र नविन बिच भक्तमानलाई रिहा गरिएको मझिमटार जाने सल्लाह भयो । हामी त्यत्तै लाग्यौ । हामी नपुग्दै बिहानैदेखि डिएसपी कोइराला र दिपेन्द्र जी मझिमटारको माटो र भक्तमानलाई रिहा गर्दा लगाएको जुत्ताको माटोमा समेत अनुसन्धान गर्दे रहेछन । मैले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान कुशलता र अनुसन्धान संयता पहिलो पटक अनुभव गर्दे थिए ।
रिर्पोटिङ सकेर हामी करिब एकसाता लामो चितवन बसाई सकेर फिर्कियौ । पछि लगातार दिपेन्द्र जी सम्पर्कमा थिए । अपहरणको अनुसन्धान र मुख्य हत्याको अनुसन्धानमा बिशेष दख्ख्ल राख्ने दिपेन्द्र जी उहिल्यै कार्य क्षमता मूल्इाकंनका आधारमा बढुवा भै सक्नु पर्ने तर उनी सधै अन्तिम क्षणमा नाम काटिने प्रहरी अधिकृत रहेछन क्यार । हालका आईजीपी देखि प्रहरीमा असल मानिएक सबै अधिकारीसाग् काम गरिसकेका दिपेन्द्र जीलाई यसपटक प्रहरी दिवसमा अनुसन्धानकर्ता भन्दै पुरस्कृत गरिएछ । साधुबाद प्रहरी संगठनलाई । तर यस्ता प्रहरी अधिकृतलाई त बढुवा गरी थप प्रोत्साहन गर्दा हुने नी होइन त ?
यी शब्द लेखिरहदा मनमा एउटा आशंका भने छ , कतै मैले दिपेन्द्र जीको बख्यान गरेको ठहर गर्दे उनलाई नै सोधपुछ हुने त होइन । पत्रकारीताको धर्म सम्झेर मैले एउटा सफल अनुसन्धानकर्ताका बिषयमा आफ्नो अनुभव राखेको छु । अन्यथा मान्नेका मुख थुन्न सकिदैन । जय होस ।